အွန်လိုင်းကနေ သင်ခန်းစာများ သင်ယူနိုင်တဲ့ WEBSITE (37) ခု - Myanmar Network
Posted by Aung Mon Chan on August 21, 2015 at 11:35 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
သင် skill အသစ်တစ်ခုခု သင်ယူချင်နေပါသလား? အပြင်မှာ ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ သင်တန်းတွေ၊ ကျောင်းတွေမှာ သွားတက်စရာမလိုဘဲ အွန်လိုင်းကနေ အလွယ်တကူ သင်ယူလို့ရနေပါပြီ.။ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ website (37) ခုမှာ သင်ယူချင်တာအားလုံး သင်ယူလို့ရပါတယ်.။ အားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိတ်မုန့်ဘယ်လိုဖုတ်ရမလဲ ကနေစပြီး Data Analytics အထိ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်.။ Course အများစုဟာ Free ဖြစ်ပါတယ်.။ သင့်မှာ Visa, Mastercard အစရှိတဲ့ Online Payment တွေ ရှိတယ်ဆိုရင် Paid Course တွေကိုလဲ ဝယ်ယူသင်ကြားနိုင်ပါတယ်.။ အသုံးလိုတဲ့အခါ ပြန်ရှာနိုင်ဖို့ Bookmark (သို့) Save လုပ်ထားဖို့ အကြံပေးပါရစေ.။ ကဲ ဘာတွေပါလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်..
Ref: The 37 best websites for learninganew skill
Permalink Reply by Aung Myo Htut on August 24, 2015 at 19:28
I am familiar with edx and duolingo when I was in Taunggyi in which the internet connection is very fast. When I move to Lashio where the connection is so poor and I cannot do the courses I had joined and cannot join any courses on edx. I like duolingo application which was downloaded on google play store which is very good in language teaching.
Permalink Reply by awn ja jenghpang on August 25, 2015 at 14:46
Permalink Reply by Hay Man on August 26, 2015 at 11:09
Permalink Reply by Hnin Sandi Aung on August 26, 2015 at 15:11
Permalink Reply by trilay on August 26, 2015 at 17:31
Permalink Reply by Myo Lin Aung on August 30, 2015 at 13:51
Permalink Reply by Aung Soe Oo on September 1, 2015 at 16:19
Permalink Reply by Nyi nyi lwin on September 10, 2015 at 12:33